Olana mahazatra | Shandong Dingtaisheng Machinary Technology Co., Ltd.
OLANA SY VAHAOLANA REHETRA AMIN'NY RETORT STERILISATION
Ny karazana fitaovana rehetra dia hiseho mandritra an'io na io olana io, tsy olana mahatsiravina ny lakileny, ny lakileny no fomba marina hamahana ny olana. Etsy ambany izahay dia mampiditra vetivety ny olana iraisana sy ny vahaolana amin'ny valin-kafatra maro.
1. Satria diso ny haavon'ny rano, avo na ambany ny mari-pana amin'ny rano, ny tsy fahombiazan'ny lakan-drano, sns., Ilaina ny mampiasa fomba fitsaboana marina arakaraka ny olana samihafa.
2. Ny peratra famehezana dia mihantitra, mivoaka na tapaka. Izany dia mitaky fanaraha-maso alohan'ny fampiasana sy fanoloana ny peratra famehezana ara-potoana. Raha vantany vao miseho ny fiatoana dia tokony hiroso amin'ny fanapaha-kevitra ny mpandraharaha na hanolo azy eo ambanin'ny toerany hiantohana ny mari-pana sy ny tsindry azo antoka.
3. Tapaka ny herinaratra tampoka na fahatapahan-gazy Rehefa sendra io karazana toe-javatra io dia jereo tsara ny toe-pahasalaman'ny retort, manaova fisoratana anarana, ary fenoy ny sterilisation rehefa miverina ny famatsiana. Raha mijanona mandritra ny fotoana maharitra ny famatsiana dia mila mamoaka ireo vokatra ao amin'ny retort ianao ary tehirizo, ary avy eo manohy miasa mandritra ny fiandrasana ny famerenana amin'ny laoniny.